လူကြီးတစ်ယောက်အရွယ်လျှာနဲ့ မွေးဖွားလာတဲ့ကလေးငယ် ခွဲစိတ်ပြီးနောက် ပြုံးပြနိုင်လာ
မိုးမင်းထွန်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ ပိုင်စလေမော်ရစ်ဆင်ဆိုတဲ့ကလေးငယ်ဟာ မွေးကတည်းက လူကြီးအရွယ်အစားရှိ တဲ့လျှာကြီးနဲ့မွေးဖွားလာခဲ့ပါတယ်။ အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတာကြောင့် မွေးဖွားပြီးတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိ အ သက်ရှုကိရိယာအကူအညီပေးထားခဲ့ရပါတယ်။ Beckwith Wiedemann Syndrome(BWS)ရောဂါရှိနေကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ကလေး ၁၁၀ဝ၀မွေးတိုင်း တစ်ကြိမ်သာဖြစ်ပွားလေ့ရှိတဲ့ ကြီးထွားလွန်ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးရဲ့လျှာအရွယ်အစားကြောင့် ဆရာဝန်တွေတောင် အံ့အားသင့်ခဲ့ရပါတယ်။ လျှာရဲ့အစိတ်အပိုင်းချို့ကို...
နာမည်ကျော်အဆိုတော် ချမ်းချမ်း မေးချင်တဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာမေးခွန်း
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ မေး။ အရမ်းပင်ပန်းလာရင်၊ ခရီးပမ်းလာရင် ခေါင်းတစ်ခြမ်း အရမ်းကိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အရမ်းခင်တဲ့သူတွေ တောင် မေ့တတ်တယ်။ တစ်ခုခုလုပ်ပြီးသွားရင် အဲဒီလိုလုပ်ပြီးသွားတာကို ပြန်မမှတ်မိတတ်ဘူး။ အဲဒီလို မေ့တတ်တာက ပင်ပန်းမှုနဲ့ဆိုင်သလား၊ မျိုးရိုးနဲ့ဆိုင်တာလား၊ ပင်ပန်းမှုကြောင့် တဒင်္ဂရောဂါလား...
ကျော်ကြားသူတို့၏ ကျန်းမာ၊ လှပ၊ လူမှုဘဝ
အဆိုတော် ချမ်းချမ်း နဲ့တွေ့ဆုံခြင်း တစ်နေ့တာ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းမှုပုံစံ အမရဲ့ တစ်နေ့တာ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းမှုပုံစံက Lotion ကို ပုံမှန်လိမ်းတယ်။ တစ်ခါတလေ ရေချိုးခါနီး Scrub(ကြေးချွတ်)လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ တစ်လတစ်ကြိမ် Hello Beauty Spaမှာ ပေါင်းသွားတင်ဖြစ်ပါ...
ညစာက ဘာဟင်းလဲ အချစ်ရယ်
ဇွန်ခိုင်ဦး(ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကိုသူရိန်တစ်ယောက် ဇနီးဖြစ်သူ လဲ့ရည်ဟာ ခေါ်မကြား၊ အော်မကြား ဖြစ်နေတဲ့အတွက် နားအကြားကိရိယာ များ လိုအပ်နေပြီလားလို့ စိတ်ပူနေခဲ့ပါတယ်။လဲ့ရည်ကို ဘယ်ပုံဘယ်နည်း ကူညီပေးရမယ်ဆိုတာ မသိလို့ ဒီပြဿနာကို ဆွေးနွေးဖို့ မိသားစုဆရာဝန်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ လဲ့ရည်ရဲ့ အကြားအာရုံ ဆုံးရှုံးမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး...
ကင်ဆာ လူနာတို့အတွက် ကောက်ရိုးတစ်မျှင် . . .
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၂၀၁၅ ဇူလိုင်လတွင် ထူးဝါဖော တစ်ယောက် ဗိုက်အောင့်ဝေဒနာ စတင် ခံစားခဲ့ရသည်။ ဗိုက်အောင့်သည့် ဝေဒနာကို ပျောက်နိုးပျောက်နိုး စောင့်ကြည့်နေခဲ့သော်လည်း တဖြည်းဖြည်းပိုဆိုးလာသည်မှာ နောက်ဆုံး မခံမရပ်နိုင်လောက်အောင် ဖြစ်လာတော့သည်။ သို့ဖြစ်ရာ ဖောင်ကြီးမြို့တွင်နေသည့် ထူးဝါဖောသည် နီးစပ်ရာ ဆရာဝန်ထံ...
မိတ်ကပ်နဲ့ ဓာတ်မတည့်ရာက ဖက်ရှင်ရှိုးလျှောက်ခွင့် လွဲချော်ခဲ့ရတဲ့ စူပါမော်ဒယ်
စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ပဲရစ်ဖက်ရှင်ရှိုးပွဲတွေမှာ ရေပန်းစားပြီး ကျော်ကြားတဲ့ ၁၆ နှစ်အရွယ် မော်ဒယ်လင်ဆေးဝစ်ဇန် ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ပဲရစ်ဖက်ရှင် နောက်ဆုံးရက်တစ်ခုမှာ မိတ်ကပ်နဲ့ ဓာတ်မတည့်မှုကြောင့် ဖက်ရှင်ရှိုးတစ်ခုမှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲခွင့်မရခဲ့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။”အရင်တုန်းက မိတ်ကပ်နဲ့ ဆိုးဆိုးရွားရွား ဓာတ်မတည့်တာမျိုး တစ်ခါမှ မဖြစ်ဖူးပါဘူး။...
ထိုက်ချိ ကစားခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သောကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးများ
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ထိုက်ချိကစားတာကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ ပူပင်သောကကို လျော့ပါးစေသလို ခန္ဓာကိုယ်ကို ပျော့ပျောင်းသန်စွမ်းစေပြီး ဟန်ချက်ညီစေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ် သန်စွမ်းကျန်းမာဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ခဲ့တဲ့ ထိုက်ချိလေ့ကျင့်ခန်းဟာ အခုအခါ မှာ စိတ်ဖိစီးမှု လျော့ကျရေးအတွက်သာမက တခြားကျန်းမာရေး အခြေအနေ အမျိုးမျိုးကိုလည်း ကောင်းမွန်စေတာတွေ့ရှိရပါတယ်။ ထိုက်ချိဆိုသည်မှာ...
ခြင်ကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေကာကွယ်ဖို့ ဆေးစိမ်ခြင်ထောင်သုံးကြစို့
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မေး . ဆေးစိမ်ခြင်ထောင်နဲ့အိပ်ရင် ဘယ်လိုရောဂါတွေ ကာကွယ်နိုင်ပါသလဲ ဆရာ၊ ခြင်ဆေးခွေသုံးတာနဲ့ ဆေးစိမ်ခြင်ထောင်သုံးတာ ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းပါသလဲ၊ ဆေးစိမ်ခြင်ထောင်သုံးတဲ့နည်းလမ်းကို သိပါရစေဆရာ။ ကိုသန်းထူး၊ ပဲခူး။ ဖြေ . ဆေးစိမ်ခြင်ထောင်သုံးတာကြောင့် ငှက်ဖျားရောဂါ၊သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါအစရှိတဲ့...
Page 685 of 689« First‹ Previous681682683684685686687688689Next ›Last »